लाभांश घोषणाको मिति नजिकिंदै गर्दा शेयर बजार प्रभावित, ०.७३ प्रतिशतले बढ्यो नेप्से | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर लाभांश घोषणाको मिति नजिकिंदै गर्दा शेयर बजार प्रभावित, ०.७३ प्रतिशतले बढ्यो नेप्से
on: १७ भाद्र २०७५, आईतवार १६:३९ मुख्य खबर, लगानी
लाभांश घोषणाको मिति नजिकिंदै गर्दा शेयर बजार प्रभावित, ०.७३ प्रतिशतले बढ्यो नेप्से
भदौ १७, काठमाडौं । आइतवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ७३ प्रतिशतले बढेको छ । अधिकांश बैङ्कहरुको लाभांश घोषणा गर्ने मिति नजिकिंदै गर्दा शेयर बजार पनि प्रभावित भएको छ । केही समय निरन्तर ओरालो लागिरहेको बजार साताको पहिलो कारोबार दिन बढेको छ ।
परिसूचकसँगै कारबोर रकम र लगानीकर्ताहरुको सम्पत्तीमा पनि बृद्धि भएको छ । यस दिन अन्तिम २ घण्टामा परिसूचक ८ दशमलव ५९ अङ्कले बढेर १ हजार १ सय ९० दशमलव २८ पुगेको हो ।
त्यस्तै, ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ८० प्रतिशतले बढेर २ सय ५१ दशमलव ८० अङ्क पुगेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा यस दिन कारोबार रकम ४० दशमलव ८९ प्रतिशतले बढेर रू. ३० करोड २५ लाख पुगेको छ । त्यस्तै, बजार पूँजीकरण रू. १० अर्ब २१ करोडले बढेर रू. १४ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ ।
यस दिन उत्पादन तथा प्रशोधन, ‘अन्य’ र जीवन बीमा समूह बाहेक कारोबारमा आएका सबै समूहको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्से परिसूचक उकालो लागेको हो ।
होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको छ । कारोवारमा आएका सबै होटल कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक ३२ दशमलव ११ अङ्कले बढेको हो । बैङ्किङ समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र विकास बैङ्कको शून्य दशमलव ९५ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, लघुवित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ६९, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ५१, जलविद्युतको शून्य दशमलव ३८ र वित्त कम्पनीको शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको हो ।
‘अन्य’ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव २७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन र जीवन बीमा समूहको न्यून अङ्कले घटेको छ ।
एनआईसी एशिया बैङ्कको रू. ३ करोड २४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस वाणिज्य बैङ्कको ३ सय ५१ पटकको व्यापारमा ९१ हजार ६ सय ४९ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यस बैङ्कको शेयर मूल्य रू. १९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३ सय ५९ पुगेको छ । त्यस्तै, सुर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य ३ दशमलव ३१ प्रतिशत घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ५ सय १ मा सिमित रहेको छ ।
यस दिन ८८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, ४९ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ भने २७ कम्पनी स्थिर रहेका छन् । सो दिन १ सय ६४ कम्पनीको ४ हजार २ सय ४२ पटकको व्यापारमा ९ लाख ६० हजार ७ सय १४ कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।
यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ४७ दशमलव ५७ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा शेयरको खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव ७९ अङ्क रहेको छ । यसले बजार बुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।